हिमाल देखि समुन्द्र सम्मः यात्रा संस्मरण - लुम्बिनी समाचार
प्रकाशित मिती March 29, 2018 | Bishal Aryal
लुम्बिनी बाणिज्य क्याम्पस, बुटवल
चैत ४ गतेसम्मको लामो फाईनल परिक्षाको थकाईलाई मेटाउन नपाउँदै ५ गते बाट नै गुजरातको लागी हाम्रो यात्र करिव १ महिना अगावै तय भएको थियो । विद्यार्थीहरुको सर्वार्णिड विकासको लागी र अन्तराष्ट्रिय शैक्षिक प्रणालीको जानकारी दिने उद्देश्यले लुम्विनी वाणिज्य क्याम्पस बुटवलले ःद्यब् का विद्यार्थीहरुको लागी भारतीय प्रधानमन्त्रि नरेन्द्र मोदीको जन्मस्थान गुजरात सम्मको शैक्षिक भ्रमणको आयोजना गरेको थियो । भ्रमणमा लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस बुटवलका एम.वि.ए डाईरेक्टर प्रो. डा. तारा प्रसाद उपाध्याय र क्याम्पस प्रमुख प्रो. डा. ईश्वर गौतम सहित एम.वि.ए का ३१ जना विद्यार्थी सहित जम्मा ३३ जनाको सहभागीता थियो ।
५ गते रातको १०ः२० बजेको रेलको टिकट कन्फर्म भएकोले हाम्रो टोली दिउसोको करिव १ बजेतिर बुटवलबाट बसमा यात्रा आरम्भ ग¥यो । भैरहवा सम्म विद्यार्थीहरु उठाउँदै उठाउँदै जाँदा करिव २ः३० बजे हामी सुनौलीमा पुगियो । सुनौलीबाट बस चढेर गोरखपुरतिरको यात्रा तय भयो । टोलीमा धेरैजसो विद्यार्थीहरु भारतको पहिलो पटक भ्रमण गर्ने थियौँ र कतिपय पहिलो पटक रेलको यात्रा गर्न पाउने भयौँ भनेर उत्साहीत पनि थियाँै । बसमा रमाईलो गर्दै हामीहरु करिव ७ बजेतिर गोरखपुर रेल्वे स्टेसनमा पुगीयो ।
रेल्वे स्टेसनमा पुगिसकेपछि हामीहरु सवैवेटिङ रुममा व्यागहरु राखी पहिलो रेलअनुभवलाई कुर्दाै गर्दा केही साथीहरु ईन्डियन सिमहरु किन्न बाहिर निस्कियौ । सिम किनेर घरतिर खवर गरिसकेपछि खाना खान होटल तिर प्रस्थान गरियो । होटलमा कामगर्ने एकजना नेपालीनै रहेछन् । हामीलाई केही सहज महसुस भयो नेपाली भेट्न पाउँदा । खाना खाईसकेपछि हामी स्टेसन फर्कियौँ । स्टेसनमा आईपुगेपछि थाहा भयो टे«न डिले छ भन्ने । कुर्ने बाहेक अरु उपाय पनि थिएन हामीहरु सँग । पहिले रेलको यात्रा गरिसकेका केही साथीहरु आफ्नो अनुभव सुनाउँदै थिए । कोही झोलामा टाउको अड्याएर निदाउन थालीसकेका थिए । कोही सेल्फि खिचेर फेसबुकमा पोस्टाउँदै थिए ।
स्टेसनमा बसेर आधा केजी मच्छर मारिसक्दा पनि टे«नको कुनै अत्तोपत्तो थिएन । ६ गते साथी गौरवको वर्थडे परेको हुनाले १२ बजे मनाउने हामीले तयारी गरिरहेका थियौँ । लड्डुको केक बनाएर मनाएको बर्थडे ले हाम्रो यात्रालाई अविस्मरणीय बनाउन अझै टेवा ग¥यो । ४ घण्टा ढिलो गरेर करिव २ बजे तिर स्टेसनका एनाउन्स भयो रेल आउँदैछ भनेर । हामी अर्ध निन्द्राबाट उठेर हतारहतार झोलाहरु समाल्न थाल्यौँ । पहिलो पटक रेल चढ्न लागेको कतै छुटिनेपो होकी भन्ने डरले निकै सर्तक थियौ हामीहरु । सवैजना आफ्नो सिटमा बसिसकेपछि नयाँ अनुभवको एक नयाँ यात्रा सुरु भो । उत्सुकताले हामीहरुको निन्द्रा हराईसकेको थियो । अन्य यात्रहरु निदाईरहेका थिए । हामीहरु पनि आफ्नो आफ्नो सिटमा निदाउने सुर गर्दै थियौ तर सायद निन्द्रादेवि नेपालमानै छुटिछन् ।
२०५३ कि.मि को गोरखपुरदेखी राजकोट सम्मको यात्रा निकै रोमान्चक बन्यो । दिनभरि यताउता गरिरहने चाय–चाय स्वरले दिक्क बनाएको त थियो तर बेलाबेलामा साथीहरुविच हुने गफ ले र नयाँ नयाँ ठाउहरुको दृश्यले उर्जा थपिरहेकै थियो । रेल सुरुदेखीनै ढिला चलिरहेको थियो । हामी हाम्रो योजनाभन्दा ढिलो पुग्छौ भन्नेमा विश्वस्त थियौ । ६ र ७ गते हामी पुरै रेलको यात्रामानै रमायौँ । ७ गते साझ ७ बजे तिर राजकोट पुगियो । राजकोटमा हामीलाई रिसिभ गर्न सौराष्ट्र युर्निभसिटिबाट बस आएको थियो । सौराष्ट्र युनिभसिटिले हामीहरुलाई बस्ने तथा खाना खाने व्यावस्था गरेको थियो । कतिवेला ठुलाठुला पुल मुनी बाट त कतिवेला ठुलाठुला पुल माथी बाट गुजरातको भौतिक विकासलाई नियाल्दै हामी युनिभर्सिटी पुग्यौ । युनिभसिटि पुगिसकेपछि हामिहरु फ्रेस भएर खाना खायौँ । खानाको परिकारहरु पनि निकै नौला नौला थिए हाम्रो लागी । गुजराती खानाको पहिलोपटक स्वाद लिदै थियौ हामी । ड्राई सिटिको रुपमा प्रसिद्ध गुजरातमा मदिरा निशेध गरिएको रहेछ । प्रायजसो गुजरातीहरु साकाहारी नै हुने रहेछन् । हामीलाई पनि साकाहारी भोजन ले स्वागत गरे । खानामा अत्याधिक चिनीको प्रयोग गरिदो रहेछ । दाल, तरकारी सवैमा चिनिको प्रयोगले गर्दा हामीलाई अलि के नमिले के नमिले जस्तो आभास भैरहेको थियो तरपनि भोजन भन्दा भोक मिठो भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्दै पेटको देउतालाई गुलीयो खाना अर्पित गरियो । खाना खाईसकेपछि सौराष्ट्र युनिभर्सिटीका कलपति प्रतापसिङ चौहान सहित अन्य प्रोफेसरहरुको टोलीले हामीलाई युनिभर्सिटी को परिक्रमा गराउँदै सामान्य परिचय दिनुभयो । केहिक्षणको भ्रमण पश्चात हामीहरु युनिर्भसिटिको गेष्ट हाउसमा अर्को दिन गर्ने प्रिजेनटेसनको तयारी सकाएर आएर आराम ग¥यौँ ।
अर्को दिन ८ गते विहानै उठिसकेपछि गुजराति ब्रेकफास्ट सँगै हामीहरुलाई १० बजे सम्म बजार घुम्ने अनुमति तारा सर बाट प्राप्त भयो । हामी केटाहरुको टाली बनाएर बजार घुम्न निस्कीयौ । अटोमा चढेर एकछिन बजार घुमियो । बजारघुम्ने क्रममा केही गुजराती शव्दहरु प्नि सिक्ने अवसर प्रप्त भयो । ‘केम छो’, ‘बरोबर छे’, ‘आभार’ जस्ता शब्दहरु पटक–पटक दोहो¥याउँदै रमाईलो गर्दै गर्दा फर्किने बेला भएछ । फर्किदा एउटै अटोमा १२ जना केटाहरु बसेर आउँदाको क्षण अझै अविस्मणिय बन्यो । युनिभर्सिटि आएपछि हामीहरु फ्रेस भएर कन्फ्रेन्स हलतिर लाग्यौ । त्यहाँ सौराष्ट्र युनिभरसिटी र लुम्विनी बाणिज्य क्याम्पस विच एम.ओ.युमा हस्ताक्षर गर्ने विशेष कार्यक्रम थियो । युनिभर्सिटी को तर्फबाट आयोजना भएको कार्यक्रममा हामीले पनि नयाँ कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त ग¥यौ । त्यहाँको स्वागत गर्ने तरिका र कार्यक्रम सञ्चालनको संरचना हामीहरुले गर्दै आएको भन्दा केही भिन्न भएको महशुस ग¥यौँ । एम.ओ.यु को कार्यक्रम सकिएपछि हामीहरु त्यहाँका विद्यार्थीहरुसँग केहीबेर परिचयात्मक कार्यक्रम ग¥यौँ । सो कार्यक्रमले त्यहाँको पठनपाठन शैली, परिक्षा प्रणाली, शैक्षिक गुणस्तर, भौतिक सुविधा, विषयगत क्रियाकलापहरु, रिसर्च पेपर तथा अन्य समग्र युनिर्भसिटिको बारेमा जान्ने मौका मिल्यो । त्यसपछि हामी खाना खान पुनः बास बसेको स्थान तिर लाग्यौ । उहि गुलियो खाना खाएर हामी पुनः कन्फ्रेन्स हलमा गयौँ र हामीले तयार गरेको नेपाल परिचयात्मक प्रिजेनटेसन प्रस्तुत ग¥यौँ । अरविन्द पाठक, अन्जली पन्थी र गिता न्यौपानेले प्रस्तुत गरेको प्रिजेनटेसनमा नेपाललाई विश्वमा परिचय दिने हिमाल, लुम्बिनी, पोखरा, बन्जी, ¥याफ्टिङ, सँस्कृति, पशुपतिनाथ जस्ता कुराहरु समावेस गरिएका थिए । साथै लुम्बिनी बाणिज्य क्यामपसको बारेमा सामान्य जानकारी परि गराईएको थियो । त्यहाँको सम्पुर्ण कार्यक्रम सकेपछि हामीहरु सौराष्ट्र युनिभर्सिटीबाट सम्बन्धन प्राप्त हरिवन्दना कलेज पुग्यौ । त्यहाँका शिक्षक तथा विद्यार्थीहरु सँगको अर्तक्रिया पछि हामीहरु त्यहाँबाट निस्कियौँ । त्यसदिनको लागी औपचारिक कार्यक्रम सकिएको हुँदा हामीहरुलाई सपिङगर्नको लागी सरले समय दिनु भयो । सवै साथीहरु राजकोट बजारमा किनमेलको लागी निस्कियौ । म, प्रविन र सुसिला भएर एकछिन बजार घुमिसकेपछि मोवाईल किन्न गयौँ । नेपालमा भन्दा निकै सस्तो बजार भएकोले साथीहरु हौसिदै थिए । युनिर्भसिटि फर्किदा ८ बजीसकेको थियो । आजको खाना भने अलि भिन्न थियो । खानामा चिनि कम थियो । खाना खाईसकेपछि सवै साथीहरु गफिदै फोटो खिच्दै बस्दा १२ बजेको पत्तै भएनछ ।
९ गते विहानै उठेर हामीहरु ब्रेकफास्ट गरेपछिई.डि.आई.आई ९भ्लतचभउचभलभगचकजष्उ म्भखभयिऊभलत क्ष्लकतष्तगतभ या क्ष्लमष्ब० भारतिय उद्यमता विकास संस्थानको अवलोकन गर्न हामीहरु अहमदाबादतर्फ लाग्यौ । करिव ४ घण्टाको बसको यात्रा पछि हामीहरु राजकोट बाट अहमदाबाद पुग्यौ । ई.डि.आई.आई को अवलोकन पछि र त्यहाँका शिक्षकहरुको अन्तरक्रियाबाट हामीहरुले धेरै कुराहरु सिक्ने अवसर पायौ । भारतिय सरकारले शिक्षामा गरेको लगानी र त्यसबाट उत्पादीत जनशक्तिले देशमा पु¥याउने योगदानको बारेमा पनि बुझ्ने मौका मिल्यो । ई.डि.आई.आई ले विशेषतः आईडिया भएका तर अवसर नपाएका व्याक्तीहरुलाई उचित अवसर सिर्जना गरि उद्यमी बन्न सहयोग गर्ने रहेछ । ई.डि.आई.आईले हामीहरुलाई त्यसदिनको खानाको व्यवस्था पनि गरेको थियो । निकै भव्य क्यान्टिन्मा हामीलाई लगेर पुर्ण सत्कारको साथ खाना खाने व्यावस्था थियो । यहाँको खाना राजकोटको जस्तो गुलियो नभएर नेपाली पाराको थियो । सवै साथीहरुले खानाको प्रशंसा गर्दै खाना खाएर त्यहाँबाट हामी ए.एम.ए ९ब्जmभमबदबम ःबलबनझभलत ब्ककयअष्बतष्यल० तिर लाग्यौ । ए.एम.एमा पुगेर केहीबेरको अन्तरक्रिया तथा लाईव्रेरी अवलोकन गरेपछि हामीहरुले औपचारीक शैक्षिक कार्यक्रमहरु सकायौ । त्यसपछि हामीहरु गुजरातको पश्चिमपट्टी रहेको हिन्दुहरुको पवित्र धार्मिक स्थल सोमनाथको दर्शन गर्न नाईट वसमा त्यसतर्फ प्रस्थान ग¥यौ ।
१० गते विहानै लगभग सवा ४ सय किलो मिटरको नाईट बसको यात्रा पछि हामीहरु सोमनाथको मन्दिर परिसरमा पुगिसकेका थियाँै । सोमनाथमा भगवान शिवको दर्शन गरिसकेपछि हामीहरु केहीक्षण समुन्द्रको अवलोकन गरेर ब्रेकफास्ट ग¥यौँ । त्यसपछि हामी द्धारकामा भगवान कृष्णको मन्दिर दर्शनको लागी प्रस्थान ग¥यौ । सोमनाथबाट समुन्द्रको तटैतट करिव २३५ कि.मिको यात्रा पछि हामीहरु द्धारका पुग्यौ । बाटोमा पर्ने सुन्दर विचहरुमा केही समय बस रोकेर समुन्द्रका मनमोहक दृश्यहरुलाई क्यामरामा र मष्तिस्कमा कैद गर्दै हामी अगाडि बढ्दै थियौ । समुन्द्रको तटमा उँटको सफारीले हाम्रो यात्रालाई धेरै रोमान्चित बनायो । समुन्द्रको तटमा आफ्नो नाम वालुवामा लेख्दै फोटो खिच्दै गर्ने साथीहरुको पनि उत्तिकै भिड थियो । बाटोमा पर्ने विभिन्न मन्दिरहरुको दर्शन गर्दै हामीहरु साँझ ५ बजेतिर द्वारका पुग्यौ । होटल मिरामा बस्ने बन्दोबस्त भयो । हामीलाई बजार घुम्न राति ९ बजे सम्मको समय थियो । द्वारकाधीश मन्दिरको परिसरमा कयौ अरु मन्दिरहरुपनि थिए । मनमा भक्तिभाव प्रकट गर्दै हामीहरु हरेक मन्दिरमा भगवान्को दर्शन गर्दै थियौ । ९ बजेतिर होटल फर्किसकेपछि गुजराति थालीले पेट भरेर निन्द्रादेवीको चरणमा अर्पित भयौँ ।
११ गते विहानै समुन्द्रको नुनीलो पानीले स्नान गरेर हामी फेरी मन्दिरहरु दर्शन गर्नतिर लाग्यौँ । होटलमा २ बजे भित्र चेकआउट गर्नु पर्ने भएकोले हामीहरुलाई १ः३० बजे सम्मको समय थियो । ७ बजे तिर हामीहरु मन्दिरको दर्शन गरेर समुन्द्र तटमा गयौँ । केही समय समुन्द्रमा प्रविनको नयाँ मोवाईलबाट फोटोसेसन गरिसकेपछि हामी होटलतिल लाग्याँै । होटलमा पुगेर खाना खाईवरी हामीहरु पुनः राजकोटको यात्रा ग¥यौ । द्वारकाबाट करिव सवा २ सय किलो मिटरको यात्रा तय गरिसकेपछि हामी राजकोट पुग्यौँ । राजकोटमा साझको खाना खाईसकेपछि हामीहरु रेल प्रतिक्षामा थियौँ । रातको २ बजेको टिकट थियो हाम्रो । पहिले जस्तो ट्रेन डिले थिएन । हामीहरु अव पोख्त भईसकेका थियौँ । आफ्नो आफ्नो गु्रपको टिकट लिएर रेल चढ्याँै । फर्किदाको रेल यात्रा अझ रोमान्चित बन्यो । साथीहरुसँगको रमाईला गफ अनि बेलाबेलामा तारा सर र ईश्वर सरले सुनाउने आफ्ना अनुभव हरुले यात्रालाई उपलब्धिमुलक बनाउँदै थियो । लक्ष्मण ‘राजा’ले बेलाबेलामा लगाउने ‘च्याप्प–चिरिप्प’ गफले माहोल तताउदँै थियो । धेरैजसो साथीहरु आफ्नो आफ्नो धुनमा रेलयात्राको मनोरञ्जन लिदै थिए । हामी केही साथीहरु तारा सर र ईश्वर सर सँग राजनैतिक, वैचारीक, ग्रामिण, समसामयिक, जस्ता कुराहरु गर्दै गर्दै समय गुजार्दै थियौँ । १२ र १३ गते पुरै रेलको यात्रामा वित्यो । समयमै छुटेको भएतापनि हामीलाई ७ घण्टा ढिलो गरि करिव १४ गते विहान ३ः३० बजेतिर गोरखपुर रेल्वे स्टेसनमा पु¥यायो । गोरखपुरबाट हामीहरु बस चढेर नेपाल तिरको यात्रा सुरु गरियो । सुनौली मा आईपुगेपछि दशगजाको विचतिर सम्म गुड्ने झोला गुडाउँदै आएका हामीहरु दशगजाको विचबाट जुरुक्क उचालेर काधमा राखी आफ्नै प्यारो देश प्रवेश गरियो । १० दिन पछि देश आएको हुँदा देशको माटोले हामीहरुलाई फुल लिएर स्वागत गरेझैँ लागीरहेको थियो । हिमालको देशका हामी समुन्द्र सम्मको यात्रा अविस्मरणीय बन्यो ।